Project Catalyst, ampiasao fampiharana iPad amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Project Catalyst, ampiasao ny fampiharana iPad amin'ny Mac anao
Ny isan'ny fampiharana izay ho tohanana ao amin'ny macOS Catalina vaovao dia hitombo tokoa ao amin'ny Mac App Store noho ny tetikasa Catalyst. Amin'ity tranga ity dia anarana ofisialin'ny fantatray ho tetikasa Marzipan izy io, ka io no anarana vaovao.
Manomboka amin'ny fararano rehefa navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Mac OS vaovao, ireo mpampiasa dia hanana kinova Mac momba ireo fampiharana ankafizinay izay misy. Tsy midika izany fa hiasa amin'ny Mac ny rindranasa iPad rehetra, fa midika kosa izany fa ho afaka hamindra mora kokoa ireo rindranasa ireo ireo mpamorona ampitomboina tokoa ny isan'ny fampiharana azo alaina amin'ny macOS.
Fampiharana bebe kokoa miaraka amin'ny Project Catalyst
Ireo Api sy fitaovana vaovao azo alaina ao amin'ny macOS Catalina izao dia manamora ny fifindran'ireo rindranasa amin'ny iPad ka hatramin'ny Mac, ka ny fampiharana mihoatra ny iray tapitrisa izay ananantsika anio amin'ny iPad dia afaka mitsambikina mora foana any amin'ny magazay Mac. Miaraka amin'izany izay tratra dia fanatsarana amin'ny fomba feno habibiana amin'ny famokarana ary izany dia ho vitanay manohiza miasa amin'ny Mac izay natombokay tamin'ny iPad ary ny mifamadika amin'izany.
Ao anatin'ireo fampiharana dia ho ampiana ny sampana rehetra ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahatongavan'ny fampiharana ofisialy Twitter, ohatra, i Apple. Hatramin'ny nanombohana ny kinova macOS Catalina vaovao, ny mpampiasa dia afaka manomboka mankafy ireo rindranasa ireo ary ny fampiharana vaovao tsikelikely dia hitohy ampidirina amin'ireo rafitra roa miaraka amin'ny interface iray namboarina mba afaka hiasa tsara amin'izy ireo amin'ny OS roa. Ny sasany amin'ireo notenenin'i Apple ankoatry ny Twitter dia miresaka fialamboly toa an'i Asphalt 9 izay ho tonga amin'ny macOS Catalina na Jira Cloud ankoatry ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Catalina » Project Catalyst, ampiasao ny fampiharana iPad amin'ny Mac anao
Ny watchOS 6 dia misy sary mihetsika vaovao famakiana ho an'ny Apple Watch
Apple dia hanohy hivarotra mozika sy horonan-tsary na eo aza ny fahafatesan'ny iTunes.